အာဟာရ - Bezzia | Bezzia (စာမျက်နှာ 2)
ကြွက်သားထုထည်ကိုမြှင့်တင်ရန်နံနက်စာစိတ်ကူး ၃ ချက်
ကုလားပဲမှုန့် - ၎င်းကိုသုံးရန်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ကြီးမြတ်စိတ်ကူးများ
အူလမ်းကြောင်းကောင်းမွန်စေရန်အစားအစာ ၅ မျိုး
အူလမ်းကြောင်းပြောင်းစီးဆင်းမှုကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသောသော့ချက်များမှာရေဓါတ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ဤအစားအစာများပါ ၀ င်သောကျန်းမာသောအစားအစာဖြစ်သည်။
ဗီတာမင် B3 ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသင်သိပါသလား။ မည်သည့်အစားအစာများသယ်ဆောင်လာသနည်း။ ဤအရာများနှင့်အရာများအားလုံးသည်သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်သင်သိရန်လိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သည်ဟုထင်ရသည့်အစားအစာ ၆ မျိုး
ကျန်းမာရေးကောင်းသည်ဟုထင်ရသည့်အစားအစာများစွာရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့ပြင်ဆင်ပုံနည်းလမ်းများ (သို့) ၎င်းတို့တွင်ပါ ၀ င်သောပါဝင်ပစ္စည်းများကြောင့်၎င်းတို့သည်မပါရှိပါ။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုတိုက်ဖျက်ဖို့အဓိကအစားအစာတွေကိုသင်သိပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ မင်းကသူတို့ကိုမင်းရဲ့အစားအစာထဲမှာနေ့တိုင်းပေါင်းစည်းနိုင်အောင်ငါတို့သတိပေးတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာထဲသို့ဟင်းနုနွယ်ရွက်မိတ်ဆက်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးစိတ်ကူးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှာသင်သိသင့်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိပါတယ်
မဂ္ဂနီဆီယမ်၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး ၅ ချက်
မဂ္ဂနီဆီယမ်၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများသည်များစွာရှိသည်၊ ၎င်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်ဇီဝဓာတုဖြစ်စဉ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်တွင်ပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရာသီဥတုကောင်းသည်စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်အသားကင်။ အသားစားရန်အတွက်စနေ၊ On …
Konjac root သည်သင့်အားကောင်းကျိုးများနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည့်အကောင်းဆုံးအစားအစာကိုသင့်အားပြောပြသည်။
သင်၌ uric acid ရှိလျှင်တားမြစ်ထားသောအစားအစာများဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့တွင် uric acid ပါဝင်မှုမြင့်မားမှုရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်ရန်သွေးစစ်ဆေးခြင်းကိုကြိုတင်သိထားရမည်။
Frangula အခေါက်, ကဘာအတွက်အသုံးပြုသလဲ
အကယ်စင်စစ်သင်သည် frangula အခေါက်သို့မဟုတ် frangula ခန်းခြောက်ရန်ကြား၏။ ၎င်းသည်သဘာဝဆေးတစ်လက်ဖြစ်သည်။
သင်ဟာထောပတ်သီးစားခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးအားလုံးကိုသိလား။ ၎င်းသည်သင်၏ဘ ၀ တွင်အမြဲတမ်းရှိနေသင့်သည့်အစားအစာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်
Macadamia nut နို့၊ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်
Granola အကျိုးကျေးဇူးများ - သင့်အိမ်ကိုလုပ်ပါ။
granola ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်သိပါသလား။ သင့်အတွက်ပြုလုပ်ပေးသမျှကောင်းကျိုးများ၊ အိမ်တွင်ပြုလုပ်ရန်မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်၊ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမည်သို့ယူရမည်ကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံးအသားအစားထိုးဘာတွေလဲ။ အကယ်၍ သက်သတ်လွတ်စားမယ်ဆိုရင်၊
chrysanthemum လက်ဖက်ရည်သည်အကျိုးရှိသလား။ ငါတို့သည်သင်တို့ကို၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် contraindications ပြောပြပါ
ကော်လာဂျင် hydrolyzed ကဘာလဲ?
သင် hydrolyzed ကော်လာဂျင်ပါဝင်သောအတိအကျသိရန်နှင့်သိလိုလျှင်၎င်းသည်သင့်အတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်သည်၊
ဤရွေ့ကား propolis ၏ခမ်းနားအကျိုးကျေးဇူးများကိုဖြစ်ကြသည်
ဒီနေ့ခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် propolis အကြောင်း၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်များပါဝင်သည့်သဘာဝရင်းမြစ်ဖြစ်သောစကားလုံးများကိုပြောချင်ကြသည်။ ဒါဟာအတွက်စံပြ ...
ဇီယာစေ့သည်ငါတို့ gastronomy ၏ဟင်းလျာအမြောက်အများကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ဆေးဝါး…
သင်သည်သစ်တော၏သစ်သီးများကိုထောင်ပြီးသစ်သီးဝလံများကဲ့သို့နှစ်သက်သူတစ် ဦး ဖြစ်မည်ဆိုလျှင်ဤဘလူးဘယ်ရီပြုတ်ရည်သည်သင့်ကိုစွဲမက်စေလိမ့်မည်။
အသက် ၅၀ မှမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရများ
ကျွန်ုပ်တို့အသက်အရွယ်သို့ရောက်သောအခါအာဟာရဓာတ်အားလုံးရရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာတွင်အချို့သောအစားအစာများကို ဦး စားပေးရမည်။
အစာအာဟာရ (၁၀) မျိုးဖြင့်အစာကြေလွယ်စေပါ
ဤခရစ္စမတ်နေ့သည်အစားအစာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်လေ့ရှိပြီးအစာခြေများသည်အလွန်လေးလံနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်နေ့ရက်များ ...
နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်စေသောအဖြစ်များဆုံးအချက်တစ်ခုမှာသွေးတိုးဖြစ်သည်။ အချက်တစ်ချက် ...
အခွံမာသီး၏စားသုံးမှုတစ်ခုချဉ်းကပ်နည်း။ တစ် ဦး ချင်းစီ၏အကောင်းအဆိုး cons ။ အပိုင်း ၂
အခွံမာသီးများစားသုံးမှုကိုအချက်အပြုတ်ချက်ပြုတ်နည်းများစွာတွင်တွေ့ရသည်။ ၎င်းတို့သည်များစွာသောအစားအစာများတွင်ပါ ၀ င်သည်။
အခွံမာသီး၏စားသုံးမှုတစ်ခုချဉ်းကပ်နည်း။ တစ် ဦး ချင်းစီ၏အကောင်းအဆိုး cons ။ အပိုင်း ၁
၎င်းအခွံမာများသည်အလွန်ကောင်းပြီးအမြဲတမ်းလက်ဖက်ရည်ကြမ်း (သို့) သရေစာအဖြစ်အမြဲတမ်းရှိနေတတ်သည်။
အစားအစာများများများများစားစားသည်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နည်းသောအစားအစာများကိုစားသုံးရန်အလောင်းအစားပြုနေကြသည်။ ကျနော်တို့စတိုင်များအကြောင်းပြောနေတာ ...
သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် keto အစားအစာကိုစားနိုင်ပါသလား။
လူအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ဖို့အတွက်သူတို့စားတဲ့ပုံစံကိုပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ keto လိုမျိုးအစားအစာများ ...
မနက်စာအတွက်သီးသန့်အစားအစာရှိပါသလား ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုနေ့၏အစားအစာအတွက်အဘယ်ကြောင့်အချို့သောအစားအစာများကိုတည်ထားသနည်း။ ငါတို့စားသင့်သလား ...
သင်သိသင့်သော hops ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ
hops အကြောင်း၊ ယင်း၏ကောင်းကျိုးများနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများအကြောင်းပိုမိုသိလိုပါကသင်သည်မှန်ကန်သောဆောင်းပါး၌ရှိသည်။ ဘာလဲဆိုတာမင်းကိုမင်းတို့ပြောချင်တယ်။
ပီဇာကြိုက်လား? သင်မကြာခဏစားချင်ပါသလား? ထိုအခါဤကယ်လိုရီ - အခမဲ့ပီဇာအခြေခံအတွေးအခေါ်များကိုလက်လွတ်မသွားပါစေနှင့်။
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအစာရှောင်ခြင်း, ကအကျိုးရှိသနည်း ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
အလွန်မြင့်တက်နေသည့်အစစ်အမှန်အစားအစာကို အခြေခံ၍ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နိမ့်ကျသည့်အစားအစာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ကိုထည့်သွင်းရမည်။
Ketosis ရိုက်ထည့်ခြင်း။ ဒါဟာကျန်းမာလား။
ကျနော်တို့အတိမ်အနက်အတွက် gluten အကြောင်းပြောဆို
Gluten သည်ကမ္ဘာအနှံ့သုံးစွဲမှုပိုမိုများပြားလာသည်။ အထူးသဖြင့်စပိန်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။
Monosodium အချိုမှုန့်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကို၎င်း၊
MSG သည်အငြင်းပွားဖွယ်ကောင်းသောအရသာကိုတိုးမြှင့်ပေးသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည် ဒီအစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ...
Keto သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးများအတွက် carb-low dieting
လူများသည်သူတို့၏ကျန်းမာရေးနှင့်အစားအစာနှင့်ပတ်သက်သောဆက်နွယ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတိုးများလာသည်။ Is ...
ယနေ့ hyperinsulinemia သို့မဟုတ်အင်ဆူလင်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်နာတာရှည်ရောဂါများပိုများလာသည်။ အဲဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ် ...
ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများစွာရှိပြီး၎င်းတို့၌မဂ္ဂနီစီယမ်ကဲ့သို့သောသတ္တုဓာတ်များပါ ၀ င်သည်။
serotonin နှင့် dopamine ကိုတိုးစေပြီးသင်၏စိတ်ဓာတ်ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အစားအစာများ
ကျနော်တို့ endometriosis အကြောင်းပြောဆို: ကဘာလဲ? ဘယ်လိုကုသမလဲ
အမျိုးသမီးများစွာခံစားနေရသောဤပြproblemနာဖြစ်သော endometriosis ကိုများသောအားဖြင့်ဟော်မုန်းရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
အနီရောင် Clover ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ
အနီရောင် Clover သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကိုယ်ခန္ဓာ၏မတူညီသောရောဂါများကိုကုသရန်အသုံးပြုခဲ့သောအပင်တစ်ပင်ဖြစ်သည်။ ငါသိတယ်…
ဗီတာမင်ဒီအများဆုံးစားတဲ့အစားအစာတွေကမင်းတို့သိချင်လား။ သို့ဖွစျ။ ကြှနျုပျတို့ပွောဆိုသမြှကိုလကျမလြှော့ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အူလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေး၏အရေးပါမှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အဏုဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအခန်းကဏ္greatကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးအကြိမ်အလေးထားပြောဆိုခြင်းသည် ...
ကျနော်တို့ဗီတာမင် B12: ကဘာလဲဆိုတာနှင့်၎င်း၏အရေးပါမှုအကြောင်းပြောဆိုပါ။
အသားစားအစားအစာ: ကဘာလဲ? ဒါဟာကျန်းမာလား။
ပစ္စုပ္ပန်၌ပေါ်ထွန်းသောအစားအစာများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအစာစားခြင်းနည်းလမ်းများ, ပို။ ပို။ အမျိုးမျိုးဖြစ်ကြသည်။ အများစုမှာ…
မိန်းမများတွင်ခန္ဓာကိုယ်မှဆံပင်ပါးခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံကိုယ်ခန္ဓာဆံပင် - ဘာလဲ၊ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ၊ ဘယ်လိုကုစားနည်း။
သင်အဟာရအများဆုံးအစားအစာများကိုရွေးချယ်ချင်ပါသလား။ ဒီတော့ kombu ပင်လယ်ရေမှော်တွေရှိနေဖို့လိုတယ်။ ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများရှာဖွေတွေ့ရှိ?
Autoimmune hypothyroidism သို့မဟုတ် Hashimoto
hypothyroidism ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများပြားလာခြင်းကြောင့်အများစုသည် hashimoto ဟုခေါ်သော hypothyroidism နှင့် ...
ဘဲအသားမှာအကျိုးကျေးဇူးတွေ၊ ဂုဏ်သတ္တိများများစွာရှိပြီးမင်းမမှတ်မိနိုင်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ငါတို့အားလုံးကိုမင်းကိုအံ့အားသင့်စေဖို့ငါတို့အားပြောလိုက်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အစားအသောက်အပြောင်းအလဲများကိုစတင်ပြုလုပ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြသည်၊ အနှေးနှင့်အမြန်ငါတို့၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုအဆုံးသတ်သွားသည်။ နေလား
နို့ထွက်ပစ္စည်း - သည်းမခံမှု၊ စားသုံးမှုနှင့်ကျန်းမာရေး
လူအများအပြားနို့နှင့်ဆိုင်သောသည်းမခံနိုင်မှုအချို့ရှိသည်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာဒီသည်းမခံ ...
ပိုလန်၊ အီတလီမှာလူကြိုက်များတဲ့အစားအစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားကြားဖူးတာ ...
အစာစားရန်စိုးရိမ်ခြင်း - ကောင်းမွန်သောအစားအစာရရှိရန်မည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း
လူအများစုကကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်ဗေဒဆိုင်ရာများအတွက်သူတို့၏အစားအစာပုံစံကိုပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ အလွန်ကြီးစွာသော ...
Melatonin လို့သိကြတဲ့ပစ္စည်းကကျွန်တော်တို့ကိုအိပ်ပျော်အောင်ကူညီပေးတဲ့အဓိကဟော်မုန်းပါ။ ဒီဟော်မုန်းကိုဖန်တီးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာသောအစားအစာလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါ၊ ပထမဆုံးစဉ်းစားရမည့်အရာမှာ ...
ကျနော်တို့ပန်းသီး cider ရှလကာရည်အကြောင်းပြောဆို: ကကောလား ဘယ်ယူမလဲ
လူများစွာသည်ပန်းသီး cider ရှလကာရည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေပြီးအာဟာရဖြစ်စေသည်ဟုထင်သောလူများရှိသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်ကဖိန်းဓာတ်ပါ ၀ င်သည့်အဖျော်ယမကာအမြောက်အများကိုသောက်သုံးလေ့ရှိသည်။
Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) နှင့်အာဟာရ
Polycystic Ovary Syndrome (အစာစားခြင်းနှင့်အစာစားခြင်း) သည်အဘယ်သို့ဆက်စပ်သနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာသည် ...
မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ချက်ပြုတ်ခြင်း - ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းကျိုးများနှင့်အန္တရာယ်များ။
ယနေ့တွင်သူတို့၏စက်ပစ္စည်းများအကြားမိုက်ခရိုဝေ့ဖ်မရှိသောမီးဖိုချောင်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ အိမ်တွေအများကြီးရှိတယ် ...
ချောကလက် - မည်သည့်အချိန်တွင်စားရမည်၊ ၎င်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးရှိသည်
ချောကလက်သည်အစားအစာနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်။ သို့သော်သော်လည်း ...
ကျွန်ုပ်တို့၏အဆစ်များ၊ ကြွက်သားများ၊ အရေပြား၊ အရိုးများသို့မဟုတ်အရိုးများ၏ကျန်းမာရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကော်လာဂျင်ပမာဏပေါ်မူတည်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်အစာစားခြင်း (သို့) အစားအစာပြောင်းလဲခြင်းတွင်များသောအားဖြင့်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ရှိသည်။
အရိုးဟင်းရည်၊ မင်းရဲ့အစားအစာထဲမှာမင်းထည့်ရမယ့် 'superfood'
ယနေ့ခေတ် 'superfood' ဟူသောစကားလုံးသည် chia, blueberries, quinoa စသည်တို့ကိုဖော်ပြရန် ပိုမို၍ ကြားရသည်။
Amaranth: ၎င်းသည်အဘယ်နည်း၊ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်မည်သို့လောင်ရမည်နည်း။
Amarano, Millet, Buckwheat ... ကန့်သတ်ချက်များအပြင်ယနေ့တည်ရှိနေသောအဟာရအမျိုးမျိုးသို့မဟုတ်အစားအစာပုံစံများ ...
Buckwheat: ဘာလဲ၊ ဘာကြောင့်များပိုများများကြားရတာလဲ၊ ဘာကြောင့်အဲဒါကိုသင့်ရဲ့အစားအစာထဲမှာထည့်ရတာလဲ
buckwheat လို့လည်းလူသိများတဲ့ Buckwheat, သီးနှံနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး ...
ယေဘုယျအားဖြင့်သီးနှံများသည်အာဟာရဓာတ်များစွာပါ ၀ င်သောအစားအစာမဟုတ်ပါ။
ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားသောအစာ ၃ မျိုး
မင်းရဲ့ရေခဲသေတ္တာထဲမှာကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစာတွေပြည့်နှက်နေလိမ့်မယ် ... ဒါပေမယ့်တကယ်တော့၊
တစ်နေ့တာသို့မဟုတ်တစ်ပတ်တာ၏မီနူးများကိုမိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်အကြိမ်များစွာပြုလုပ်သော်လည်း ... မရှိ
သင်သည်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ဓာတ်များအကြောင်းကိုကြားဖူးသော်လည်းယင်းသည်မည်သည့်အရာနှင့်မည်သည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ရှင်းလင်းစွာမသိရပေ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်သည်ကျန်းမာရန်လှုပ်ရှားမှုလိုအပ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိရှိခဲ့ရသည် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားစိုက်ထုတ်ပြီး endorphins ကိုထုတ်လွှတ်သည်။
Oatmeal: ဘယ်လိုအသုံးပြုရတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲ
အစားအစာများများများစားစားစားသုံးရန် ဦး စားပေးသောအစားအစာများထဲတွင်စီရီရယ်များစွာပါဝင်သည်။ အဲဒါ…
Circadian rhythms ဒီဟာတွေကဘာတွေလဲ။ သူတို့ခေတ်ကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲ။
Circadian rhythms သည်မတူကွဲပြားသောစိတ်ပိုင်း၊
သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် oatmeal လုပ်နိုင်သမျှ
သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် oats ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါကသင်မသိသေးသည့်အပြင်သင်၏အစားအစာကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
Quarantine ကပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတစ်ခါတစ်ရံ ပို၍ စိုးရိမ်စိတ်များစေပြီး၊ အိမ်တွင်ဤမျှကာလပတ်လုံးချုပ်ထားခြင်းခံရနိုင်သည်။
Matcha လက်ဖက်ရည်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကလူကြိုက်များလာခဲ့ပြီး၊ ဤလက်ဖက်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအရသာရှိစေနိုင်သည်။ ဒီလက်ဖက်ရည်ကအပင်မှလာသည်။
quarantine စဉ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန်အတန်ငယ်ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်, သို့သော်ဤအစားအစာများနှင့်အတူတာဝန်အလွန်ရိုးရှင်းလိမ့်မယ်။
အချို့သောနံ့သာမျိုးများ၊ မယုံနိုင်လောက်သောအချက်အပြုတ်ဂုဏ်သတ္တိများရှိခြင်းအပြင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရအလွန်အကျိုးရှိသည်ကိုလူသိများသည်။ ထို့ကြောင့်,…
စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေရန်နှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်လိုအပ်သည့်အချိန်များတွင်အစားအသောက်သည်အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ ဟ…
အစာကြေခဲရည်များသည်အလွန်လေးသောအစားအစာပြီးနောက်စားသုံးရန်ကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါ။ အရက်သည်အကျိုးမရှိပါ၊ အကောင်းဆုံးအစားအစာများကိုဆုံးဖြတ်ပါ။
အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိစေသောဟင်းသီးဟင်းရွက် ၅ မျိုး
သင်၏စိတ်ဓာတ်ကိုမြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးသော serotonin ဓာတ်စာအကြောင်းလေ့လာပါ
သင့်အားကျန်းမာရေးအတွက်သာမကသင့်စိတ်အခြေအနေအတွက်ပါအကျိုးရှိစေမည့် serotonin အစားအစာများ၏သော့များဖြစ်သည်။
သင်၏အပတ်စဉ် menu တွင်ဟင်းနုနွယ်ရွက်ကိုထည့်သွင်းပါ
ဟင်းနုနွယ်ရွက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းအင်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးကိုကျန်းမာသန်စွမ်းစေခြင်း၊ အူနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းမွန်စေသည်။
လတ်တလောတွင်အစားအစာနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များစွာရှိနေသဖြင့်မကြာခဏသတင်းမှားဖြစ်သွားသည်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတာကိုငါတို့တကယ်မသိပါဘူး ...
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝမ်းချုပ်ခြင်းသို့မဟုတ် ၀ မ်းချုပ်ခြင်းကိုခံစားရသောအခါကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည့်သဘာဝနှင့်အလွန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုမှာနို့စို့ခြင်းများကိုသောက်ရန်ဖြစ်သည်။
ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်လှုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုအရသာရှိသောတစ်ချိန်တည်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုဂရုစိုက်ရန်အရသာရှိသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်း ဦး ရာသီအသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်
ဆောင်း ဦး သီးနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ နေ့စဉ်အစားအစာအတွက်အလွန်ကျန်းမာသောအစားအစာများ၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်တို့အားကျွန်ုပ်တို့ပြသပါသည်။
ဖရုံသီးတစ်ခုလုံး၏အားသာချက်ကိုယူရန်အတွက်မတူညီသောရိုးရှင်း။ အရသာရှိသောချက်ပြုတ်နည်းများကိုလေ့လာပါ။ ဒီနှစ်ကျရင်သင်ပျော်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။
ဆောင်း ဦး ရာသီရောက်ပြီ၊ ရာသီအလိုက်အကောင်းဆုံးအစားအစာများကိုစားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်၊ သူတို့သည်အလွန်ကျန်းမာကြပြီးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေသည်။
ဒီအရသာရှိတဲ့ဒိန်ချဉ်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးဘယ်လိုကွာခြားသလဲဆိုတာကိုမင်းတို့ပြောချင်ပါတယ်။ သဘာဝဒိန်ချဉ်နှင့်ဂရိဒိန်ချဉ်, အရသာနှစ်ခုရွေးချယ်စရာ။
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအစာရှောင်ခြင်းကကိုယ်အလေးချိန်သို့မဟုတ်အချို့သောကီလိုဂရမ်အရေအတွက်ဆုံးရှုံးဖို့အစားအစာမှကြွလာသောအခါတစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုစီသည်ကွဲပြားခြားနားပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနှင့်၎င်းတွင်ကွဲပြားသောပန်းတိုင်များရှိသည်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ဒါကဘာလဲ ...
နနွင်းသည်အရသာရှိပြီးအရသာရှိပြီးသဘာဝအရသာရှိသည့် anti-inflammatory အစားအစာဖြစ်သည်။ နနွင်းကိုကျန်းမာအောင်ထိန်းသိမ်းရန်အထောက်အကူဖြစ်စေသည့်နနွင်းဆီကိုမည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်ကိုလေ့လာသည်။
သဘာဝ anti-inflammatories, ဆေးမှကျန်းမာအခြားရွေးချယ်စရာ
edamame ဆိုတာဘာလဲမသိသေးဘူးလား။ ဒီကျန်းမာတဲ့ရေစာအသစ်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်
Edamame ဟာအာခေါင်များစွာကိုအောင်နိုင်ပြီးကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ရေခဲမုန့်အကြောင်းလေ့လာပြီးသင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်ထဲကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်။ သင်နောင်တမရပါ
ပရိုတိန်းဓာတ်ပါသောအစားအစာများသည်နည်းလမ်းများစွာရှိနိုင်သည်။ နေ့စဉ်စားသုံးမှုတွင်အနည်းဆုံး ၂၅% ပရိုတိန်းရှိရမည်။ ငါတို့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုမင်းတို့ပြောပြမယ်။
ဤအစားအစာတွင်အဘယ်အရာပါဝင်သည်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောထားသည်၊ သင်မည်သို့သောက်ရမည်ကိုသင်သိသမျှကာလပတ်လုံးပဲပုပ်လက်ဆီသင်သည်သင့်ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။ မင်းကိုပြောပြမယ်
အမျှင်ဓာတ်များစွာပါ ၀ င်သည်
အမျှင်သည်အလွန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာရန်နှင့်စွမ်းအင်များစွာရရှိရန်နေ့စဉ်၎င်းကိုလောင်ရမည်။ အကောင်းဆုံးသောအစားအစာများကိုသင့်အားပြောပြပါမည်။
oatmeal ရေအကျိုးကျေးဇူးများကိုများစွာသော။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကဒီနေ့ကိုပေါင်းစပ်ပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အိမ်မှာလုပ်နိုင်တယ်။
quinoa ကိုဆေးကြောခြင်းသည်စားသုံးခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ရမည့်အခြေခံအဆင့်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ကိုယ်သင်၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ပြည့်ဝရန်သင်မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသည်။
များစွာသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူ Soursop, အသီး
Soursop သည်သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသင့်သောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသောအသီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သိရန်လိုအပ်သမျှကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြပါမည်။
ဒါတွေဟာဖရဲသီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများပဲ၊ မင်းတို့မသိနိုင်ဘူး၊ အရမ်းကျန်းမာတဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေကြွယ်ဝတယ်၊ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းငါတို့ပြောပြမယ်။
cranberries ၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ၊ နေ့စဉ်အစားအစာတွင်ထည့်သွင်းသင့်သည့်သစ်သီးအချို့သည်သင့်အားပြောပြသည်။
နာနတ်သီးအစားအစာ, သင်သိသင့်သည့် contraindications
Carob ဂျုံမှုန့်၊ သင်သိသင့်သည့်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
သင် carob ဂျုံမှုန့်ကိုမကြိုးစားရသေးပါက၎င်းအပင်များ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုသင်ပြောပြပါလိမ့်မည်။ သို့မှသာသင်သည်ဤဂျုံမှုန့်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသင်၏အစားအစာထဲသို့မိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်။
ပန်း ၀ တ်မှုန်နှင့်ဓာတ်မတည့်မှုသည်အလွန်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အတွက်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေရန်သင်မည်သည့်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြောင်းသင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဤရွေ့ကားသံပုရာ၏ဂုဏ်သတ္တိများ, ဖက်ရှင် citrus
သံပုရာသည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်အလွန်အကျိုးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်မည်သည့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုစိတ် ၀ င်စားနိုင်ကြောင်းနှင့်မည်သည့်အိမ်သုံးဆေးများကိုကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုကြောင်းသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုဂရုစိုက်လို။ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျလိုပါကဤသန့်စင်ဆေးများကြောင့်သင်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။
ပိုတက်စီယမ်သည်အလွန်အရေးကြီးသောအာဟာရဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်သောအချက်ပြမှုပြသနာရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ သတိပြုပါ
သင်သည်အားကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသက်သတ်လွတ်သမားဖြစ်ပါကဤဆောင်းပါးကိုသင်စိတ်ဝင်စားသည်
အကယ်၍ သင်သည်အားကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသက်သတ်လွတ်အစားအစာကိုလိုက်နာပါကဤဆောင်းပါးသည်သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်၊ ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်သောအစားအစာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အလွန်ကျန်းမာသောအကြီးနှင့်ရှေးခေတ် matcha လက်ဖက်ရည်၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။
လိမ္မော်ရောင်အခွံအရေပြားကိုတိုက်ဖျက်ရန်အတွက် Cellulite Anti-diet
လိမ္မော်ခွံအသားအရေကိုလျှော့ချရန်နှင့်အရေပြား၏အသွင်အပြင်ကိုတိုးတက်စေရန်အတွက် cellulite anti-diet ကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်။
သဘာဝဓာတ်ငွေ့သည်အလွန်ဖြစ်လေ့ဖြစ်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်၏အစားအစာတွင်မည်သည့်အစားအစာများကိုရှောင်ကြဉ်သင့်ကြောင်းနှင့်မည်သည့်အစားအစာများကို၎င်းတို့ရှောင်ရှားရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်။ သတိထားပါ
သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်သောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည့်အရသာရှိသောအပူပိုင်း guava အသီးများကသင့်အားကမ်းလှမ်းသောအရာများကိုရှာဖွေပါ။
ဤရွေ့ကား antioxidants အများဆုံးနှင့်အတူအစားအစာများဖြစ်ကြသည်
အခမဲ့ radikal များတိုက်ဖျက်ရေးကိုတိုးမြှင့်ဖို့ antioxidants ကြွယ်ဝသောအစားအစာများကိုလေ့လာပါ။
ပဲစေ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်အလွန်အကျိုးရှိသောအစားအစာဖြစ်သည်။ ပရိုတိန်းများသည်အားကစားသမားများသို့မဟုတ်သက်သတ်လွတ်စားသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သတိထားပါ
သင့်အားသင့်အားပြောပြသည်မှာ anti-inflammatory နှင့် antibacterial ဖြစ်သော basil tea ကြီး၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကားအဘယ်နည်း။
Omega-3 fatty acids များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအဆီဓာတ်ငါးများ၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင့်အားပြသပါသည်။
သင့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုစုပ်ယူနိုင်ရန်မည်သည့် kefir ကိုယူရမည်နည်း။ အလွန်ကျန်းမာထုတ်ကုန်။
ဤအာဟာရတဆေးသည်သင်၏အစားအစာတွင်မပါ ၀ င်သင့်ပါ။ ၎င်းကိုသင်မည်သို့စားသုံးနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်မည်သည့်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်တို့အားကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြလိမ့်မည်။
အသည်းနည်းသောအစားအစာများသည် hypocaloric diet အတွက်ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်အတွက်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပါသည်။
ခန်ဓာကိုယ်အတွက် pistachio ၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ၊ ကြွယ်ဝသောအရသာနှင့်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောသစ်သီးခြောက်တစ်မျိုးတို့သည်သင့်အားပြောပြသည်။
Kale kale မှကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောအကျိုးကျေးဇူးများမှာကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာအားကြီးမားသောဂုဏ်သတ္တိများကိုပေးသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးကိုသိသည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်ထက်ပိုများသည်၊ အူလမ်းကြောင်းကပ်ပါးကောင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမသိဘဲကျွန်ုပ်တို့ထံရောက်ရှိနိုင်သည်။ သူတို့ကိုတားဆီးဖို့ဒီပါဝင်ပစ္စည်းများ၏သတိပြုပါယူပါ။
သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်သောထူးခြားဆန်းပြားသည့်အသီးများမှထုတ်လုပ်သော mangosteen ဖျော်ရည်၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။
ကြက်သွန်ဖြူမှရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းများစွာပြောထားသည်ဖြစ်သော်လည်း၊ ဤနေရာတွင်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသော contraindications များကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
Canary မြက်သည်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်သင်မသိနိုင်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးတိုးတက်စေရန်သင်မည်သို့စားသုံးနိုင်သည်ကိုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိမ့်မည်။